अर्बौंको अदुवा उत्पादन | आर्थिक अभियान
नेपालमा वार्षिक रू. १० अर्बभन्दा बढीको अदुवा उत्पादन हुने गर्छ । त्यसमध्ये ४० करोडको मात्र निर्यात हुन्छ । यो परिमाणलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालमा अदुवाको उपभोग निकै हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । तरकारी र अचारमा मसलाको रूपमा बढी प्रयोग हुने अदुवा आयुर्वेदिक औषधिहरूका साथै क्यान्डी र शृंगारका प्रशाधनमा समेत प्रयोग हुन्छ ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६मा १ लाख ७८ हजार ९ सय ८८ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको थियो । काठमाडौंको कालिमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारको थोक मूल्य एक किलोको रू ६० का दरले हिसाब गर्दा उक्त अवधिमा १० अर्ब ७३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको अदुवा उत्पादन भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये २६ हजार ७ सय २३ मेटन भारत र २ सय १५ किलो अमेरिका निर्यात भएको र भन्सार मूल्य करिब रू. ४० करोड देखाइएको छ ।
नेपालमा विशेषगरी पहाडी भूभागमा धेरै पहिलेदेखि नै नगदेबालीका रूपमा अदुवा खेती हुँदै आएको छ । आव २०६५/६६ मा १५ हजार ८ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा खेती गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अदुवा सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने विकास क्षेत्र पूर्वाञ्चल हो ।